ICG Inoti Zvinhu Hazvisi Kufamba Zvakanaka muZimbabwe
Sangano reInternational Crisis Group, ICG, rinoti kunonoka kuzadziswa kwezviri muchibvumirano cheGlobal Political Agreement, GPA, kungangomanikidza kuti munyika muitwe sarudzo nechimbichimbi uye kukanganisa kumutsiridzwa kwehupfumi pamwe nekugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika.
Gwaro reongororo raburitswa nesangano, iro rinonzi “Resistance and Denial: Zimbabwe’s Stalled Reform Agenda”, rinoti kumuka kwemhirizhonga uye mashoko ekuti Zanu PF nemapurisa ndivo vari kuyikonzeresa, zviratidzo zvekuti pane vari kuda kumanikidza sarudzo kuti dzikasike kuitwa.
Nhumwe dzakanga dzavimbiswa neSADC kuti dzichapinda munyika kuti dzishande pamwe nesangano reJOMIC hadzisati dzapinda munyika. Sangano iri rinoti hwaro hwesarudzo kana kuti Election Roadmap pamwe nebumbiro remitemo idzva zviri kunonokawo kufamba.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira, VaCharles Mutasa, vanoti havafungi kuti Zanu PF ndiyo chete inofanirwa kupiwa mhosva yekuda kuti sarudzo dzikasike kuitwa munyika, asi kuti zvimwe zvikwata zviri mumapato ose ari muhurumende yemubatanidzwa zvine chekuita nenyaya iyi.